Haddii Ay Barcelona Ku Guulaysato Saxiixa Neymar Jr-Miyuu Valverde Wada Maamuli Karaa Messi, Suarez, Griezmann, Dembele & Coutinho? - Gool24.Net
July 15, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda Barcelona ayaa soo afjartay mid ka mid ah sheekooyinkii suuqa ugu hadal haynta badnaa tan iyo xagaagii la soo dhaafay kadib markii ay bixiyeen lacagtii heshiiska Griezmann lagu burbrin karayay, balse waxay hadda u diyaar garoobayaan hawlgalka ay Neymar Jr ku soo celinayaan.
Barcelona ayaa haddaba kooxdeeda ku ahysata xidigaha Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele iyo waliba Philippe Coutinho kuwaas oo dhamaantoo ah gool dhaliyaal ama caawiyaal gool dhaliyaal.
Laakiin waxaa lays waydiinayaa haddii ay Barcelona ku guulaysato saxiixa Neymar Jr isla markaana ayna suurtogal noqon in Coutinho iyo Dembele ay kooxda ka baxaan qaabka uu Ernesto Valverde shaxdiisa ku maamuli karo.
Iyada oo aanu xataa Neymar Jr iman kooxdiisii hore ee Barcelona ayaa la filayaa in ay Valverde ku adkaan karto in uu shaxdiisa qorshe fiican uga samayn karo shanta xidig ee kala ah Suarez, Messi, Griezmann, Dembele iyo Coutinho.
Coutinho, Dembele iyo Griezmann ayaa qiimo waali ah ku jooga Camp Nou isla markaana maamulka kooxda Barcelona uma dul qaadan karaan iyada oo xidigahan laba ka mid ahi ay kaydka la fadhiyaan lacag aad u badan.
Lionel Messi iyo Luis Suarez waxay wali u muuqdaan labada xidig ee uu Valverde inta ugu badan shaxdiisa ugu soo bilaabi doono weerarka iyada oo aan loo tixgalin doonin haddii uu Neymar yimaado iyo haddii kaleba.
Haddaba qaabkee ayuu Valverde ku xalin karaa xidigaha weerarka u badan ee uu kooxdiisa ku haysto haddii uu Neymar Jr ku soo biiro?
Tababare Valverde ayaa adeegsan kara shax aan hore Barcelona looga baran haddii uu doonayo in uu shaxdiisa ku dhex qaybiyo Messi, Suarez, Coutinho, Dembele, Griezmann iyo waliba haddii lagu soo daro Neymar.
Valverde ayaa khadka dhexe ee kooxdiisa ku soo koobi kara Sergio Busquets iyo Frenkie De Jong taas oo ugu yaraan Barcelona u ogolaan karta in Coutinho iyo Messi ay dhexda hore ka ciyaari karaan iyaga oo isku xidhka khadka dhexe iyo weerarka saamayn fiican ku yeelan kara.
Waxayna tani ogolaan kartaa in Luis Suarez, Griezmann iyo haddii uu yimaado Neymar Jr ay saddexda weerarka ah hal mar ku soo wada bixi karaan laakiin waxay tani keenaysaa in Dembele iyo Coutinho uu midba markiisa kaydka fadhiisan karo.
Waxay sidoo kale taasi sababi kartaa in Valverde uu shaxdiisa u badali karo mid saddex difaac ku tiirsan halkii ay afarta ka ahaayeen, wuxuuna taas ku xalin karaa in Valverde uu heli karo fursad uu hal mar garoonka ku soo wadaa galin karo gool dhaliyaasha kooxdiisa.
Halkan kaga bogo Qaabka uu Valverde shaxdiisa hal mar ugu soo wada bilaabi karo Messi, Suarez, Griezmann, Coutinho iyo haddii uu helo Neymar Jr iyada oo Dembele uu booskiisa u dagaali doono oo aanu boos joogto ah heli doonin.
Laakiin halista ay shaxdani leedahay ayaa ah in Barcelona si sahlan goolal looga dhalin karo haddii ay kooxda ka soo horjeedaa ku ciyaarto nooca weerarka deg dega ah ee ay inta badan Blaugrana natiijada kaga helaan.